CBD Iyo Neefta: 4-ta Faa'iido ee ugu Saraysa Bukaannada • Dawooyinka Inc.eu
Markii ay soo if baxeen daaweyn kale, daawooyinka loo qoro waxay la kulmeen hoos u dhac weyn xagga iibka. Inkasta oo dhowr sababood ay tilmaamayaan kordhinta waxyeelooyinka waxyeelada leh ee isticmaalka muddada-dheer, dadku waxay ka faa'iideysanayaan inta badan qaabab kale oo daaweyn iyo daaweyn ah.
1 CBD iyo neefta
1.1 1. CBD waxay leedahay guryo ka hortag ah
1.2 2. CBD waxay keentaa bronchi inay weyso
1.3 3. CBD way la dagaallami kartaa feedhaha
1.4 4. CBD waxay joojin kartaa soo-saarka dheecaanka xad-dhaafka ah
2 Ugu dambeyntii, ku saabsan CBD iyo neefta
Daawooyinka dabiiciga ah, geedaha iyo xilliga firaaqada ayaa ah sababaha dadku u doonayaan inay maalgashi badan ku bixiyaan yareynta xaaladaha gaarka ah iyo astaamahooda. Intaas waxaa sii dheer, supplements-yadaas ma keenaan waxyeellooyin dawooyin ah marka lagu maareeyo qiyaasta saxda ah. CBD waa shey dabiici ah oo leh sifooyin daaweyn oo ka faa'iideysta bukaanka xaaladaha kala duwan leh. Waxa kale oo jira xeryo iyo nuucyo kale oo suuqa yaala oo aad ku baari karto, sida kan Xaragada CBD in laga heli karo Yurub.
CBD waxay ka timaaddaa xashiishadda xashiishka ee loo yaqaan 'Sativa plant' waana wax soosaar hemp warshad ah. Dheeraadku ma yareyn karo oo keliya heerarka xanuunka, walaaca iyo niyad-jabka, laakiin sidoo kale wuxuu sababi karaa saameyn deggen. Mana soo saarto heer sare oo la xidhiidha THCmaaddaama kabitaanku leeyahay qiime THC jilicsan oo ka yar ama u dhigma 0,3%.
CBD iyo neefta
Neeftu waa cudur sambaba oo raaga oo ay sababto hawo mareennada bararsan ama bararsan. Tani waxay keentaa in marinnada hawadda ee sanbabadu cidhiidhi noqdaan oo cidhiidhi noqdaan, taasoo u keenta qof neef qaba inuu neef qabatimo. Intaas waxaa sii dheer, marinnada hawadu bararsan yihiin waxay la kulmaan qadar aad u badan oo soo saar xabka ah oo qofka dhib ku ah inuu neefsado. Mid ka mid ah noocyada ugu badan ee neefta waa xiiqda xasaasiyadda, halkaasoo nidaamkaaga difaaca uu uga bato xasaasiyadda.
CBD, dhanka kale, waxay u keeni kartaa duubayaasha xanuunka jirka celcelis hoose. Maadadu waxay leedahay saameyn liddi ku ah bararka iyo bronchodilating oo si weyn u caawin kara dadka qaba neefta. Si aan wax badan uga ogaano sida CBD ay u saameyso astaamaha neefta, aan si kooban u dul marno qaar ka mid ah waxtarka CBD ee dadka neefta qaba.
1. CBD waxay leedahay guryo ka hortag ah
Caabuqu ma saameyn karo oo kaliya nidaamkaaga difaaca, laakiin wuxuu sidoo kale saameyn ku yeelan karaa caafimaadkaaga maskaxda. Xaalado dhawr ah oo neef ah, caabuqu wuxuu door muhiim ah ka qaataa kicinta. Kuwa qaba xiiqda xasaasiyadeed waxay la kulmaan si lama filaan ah waxa loogu yeero kacsanaan marka ay la kulmaan xasaasiyado. Tani waxay sababtaa nidaamka difaaca jirka inuu soo saaro jawaab xanaaq badan oo u eg jawaab degdeg ah. Markaa falcelintu waxay keentaa in marinnada hawadu ay bararaan, taasoo keenta murqo xanuun iyo soo saarista xabka oo kordha. Mid ka mid ah waxyaabaha saafiga ah ee CBD waa Laashta dabiiciga ah, taas oo aad iskuday isku dayi karto tan.
Ku darista CBD qayb ka mid ah qaab nololeedkaaga ayaa kaa caawin karta xaaladaha noocaas ah ee neefta. Iyada oo leh astaamaha anti-bararka, CBD waxay soo saari kartaa dhexdhexaadiyeyaal ka hor tag ah oo loo yaqaan 'fiber C' iyo unugyada naaska. Mid ka mid ah baaritaan ayaa muujisay in CBD ay kaa caawin karto yareynta cytokines bararka. Maaddaama qabtayaasha cannabinoid ay ku jiraan sambabaha, CBD ayaa isku xirta oo la falgasha iyaga, taasoo horseedda caabuq weyn oo caabuq ah. Xaraashka 'CBD gumams' waxay u dhaqmi kartaa sidii difaac dheeri ah oo kaa caawinaysa yareynta astaamaha.
2. CBD waxay keentaa bronchi inay weyso
Dadka qaba cudurka neefta waxay la kulmaan weeraro gardarro ah marka marinnada hawadooda ay yaraadaan oo xiraan. Xaaladahaas oo kale, mareenkooda ma gudbiyaan ogsijiin ku filan qofka inuu neefsado. Tanina waxay keentaa neef-qabasho iyo qufac, oo si xun u saameeya dadka neefta qaba.
Si kastaba ha noqotee, astaamaha daaweynta daroogada cannabis iyo xeryaheeda ayaa si weyn u caawin kara yareynta calaamadaha horseeda calool istaagga. Intaa waxaa sii dheer, saamaynta falanqaynta ee Ka yaree xanuunka CBD iyo neefsashada oo yaraata ee weerarada xiiqda.
3. CBD way la dagaallami kartaa feedhaha
In kasta oo xabad xanuunku aanu ahayn cunsurka ugu weyn ee keena xiiqda, bukaanjiifka qaar ayaa la kulmi kara inta lagu jiro weerarka xiiqda ee daran Kaligeed, xanuunka laabta ayaa laga yaabaa inuusan waxbadan kugu yeelin, laakiin marka lagu daro neefta oo gaabisa inta lagu jiro weerarka, xaalada oo dhan waxay noqon kartaa mid dilaa ah oo xanuun badan. CBD, dhanka kale, waxay la dagaallami kartaa oo yareyn kartaa xanuunka laabta iyo astaamaha ay keento.
Maaddaama jidhku leeyahay ECS-keeda, daawadan dabiiciga ahi waxay xiraysaa oo la xiriirtaa ECS waxayna ku xidhan tahay soo-dhoweeyeyaasha taasoo u horseedda saameyno xanuun. Endocannabinoid ee xanuunka keena waa arachidonoylglycerol, oo analoggeedu yahay CBD-ka hemp-ka. Isticmaalka astaamaha bogsashada ee kaabahan dabiiciga ah waad hagaajin kartaa saameynta xanuunka inta lagu jiro cudurka neefta saameyn ku yeesho.
4. CBD waxay joojin kartaa soo-saarka dheecaanka xad-dhaafka ah
Inta lagu jiro weerarada neefta, bukaanada neefta waxay la kulmaan neefsasho la xiriirta hawo mareenka oo barara iyo wax soo saar badan oo xiiq ah jidadkan oksijiin. Marka marinnada hawadu bararaan, joogitaanka cytokine (IL-13) waxay soo saartaa xabka xad-dhaafka ah.
Ku darista walax dabiici ah sida CBD qaab nololeedkaaga waxay si weyn u yareyn kartaa wax soo saarka xabka ee dadka neefta qaba. CBD waxay u egtahay inay saameyn ku yeelato heerarka borotiinka cytokine ee mas'uulka ka ah soo saarista xabka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku cayriso xabku soo saaray qufaca iyo hindhisada.
Ugu dambeyntii, ku saabsan CBD iyo neefta
Sida xaalad kasta oo kale, neefta ayaa waxyaabo aad u xun ku abuuri karta ama ku sii xumaynaysa bukaanka waqti aan badnayn. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in isla markiiba la daweeyo. Iyadoo la adeegsanayo astaamaha daweynta iyo xanuunka ee CBD, waxay muujisay natiijooyin rajo leh oo saameyn ku yeelanaya cudurka neefta iyo astaamaheeda. Waxa kale oo aad la tashan kartaa daraasado kala duwan oo hore loogu sameeyay walaxda iyo neefta oo keliya. Laakiin kahor intaadan cunin CBD si loo daaweeyo neefta, waa inaad dabcan had iyo jeer kala tashataa dhakhtarkaaga.
neeftaCBDsaliid cbdcaafimaad lehcaafimaadkacilmi baarisTHC
Sida Saliid CBD u garaaci karto kooxda loo yaqaan 'Corona Blues' (oo kaa caawinaysa inaad shaqadaada dib ugu laabato)
Cudurka faafa ee 'COVID-19' ma laha taariikh cad oo dhammaad ah. Shirkadihii ayaa albaabada u laabay markii labaad. Gobollada ...
Toddobaadka Taranka Qaranka: Sidee Xashiishku U Saameeyaa Hormoonnada?
Toddobaadka Wacyigelinta Taranka Qaranka ayaa looga golleeyahay in lagu hagaajiyo fahamka dhibaatada dhalmo la’aanta…
Warbixinta cilmi-baarista: Suuqa CBD oo leh saadaalinno ilaa 2025
Cilmi-baarista Wiseguy waxay falanqaysay suuqa CBD iyada oo ku saleysan arrimo kala duwan sida qiimaha, silsiladda saadka iyo ...